प्रभावकारी अवधारणा लागि सोडा शावर?
अक्सर, एक बच्चा गोदभराई समस्या शुक्राणु को गर्भाशय र अन्डा पुगन प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई कारण हो: तिनीहरू केवल मर्न अम्लीय वातावरण योनी को। एक सोडा douching धेरै मद्दत गर्छ गर्भ धारण गर्न: तर यो समस्या समाधान गर्न एकदम सरल छ। तर, यो गर्न, पहिलो नजर, पूर्ण सुरक्षित विधि मा, पूर्व परामर्श बिना Resort आफ्नो obstetrician आवश्यक छैन संग। उदाहरणका लागि, artificially परिवर्तन भएको योनी microflora लागि सिफारिस douching , ग्रीवा क्षरण पोस्ट-गर्भपतन वा postpartum अवधिमा, जब (जस्तै endometritis र adnexitis रूपमा) gynecological रोगहरु को एक नम्बर।
सामान्यतया डाक्टर एक गर्भावस्था योजना को यो विधि प्रयोग गर्न कुनै पनि गम्भीर contraindications हेर्न छैन, तर तिनीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ यो अवधारणा लागि douching गर्न आवश्यक छ र के एकाग्रता सोडा समाधान हुनुपर्छ गर्दा। साथै, एक चिकित्सक को douching सहायता गर्न सक्दैन जो गर्भावस्था को कमी को लागि धेरै फरक कारण प्रकट हुन सक्छ। तर डाक्टर कुनै पनि contraindications (वा पनि सोडा अवधारणा लागि douching सिफारिस) देख्न गर्छ भने, त्यसपछि तपाईं यो प्रक्रिया छैन पहिले नै उसपछि गर्भावस्था र मासिक धर्म समयमा गर्न सकिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ।
1 चम्मच बेकिंग सोडा तातो पानी उम्लिरहेको को 1 लीटर मा भंग हुनुपर्छ: निम्नानुसार सोडा समाधान तयार छ। यसलाई सोडा उम्लिरहेको पानी केही चमचा खन्याउन सुरु, र त न्यानो पानी आवश्यक मात्रा सम्म ल्याउन सबै भन्दा राम्रो छ। पनि सिंचाई को लागि प्रयोग वस्तुहरू ध्यान साफ कि र हुनुपर्छ decontaminated भूल छैन: यो एक तिनीहरूलाई कुल्ला गर्न सक्छ पोटासियम Permanganate को समाधान वा फोडा।
अवधारणा लागि सोडा douching एक पारंपरिक सिरिंज वा नासपाती-warmers प्रयोग गरिन्छ। यो आवश्यक छैन रूपमा चाँडै सकेसम्म सम्पूर्ण समाधान परिचय प्रयास छ: यो समय लाग्न र योनी पर्खालहरु को सिंचाई सजिलै भयो भनेर पक्का गर्न राम्रो छ। यो प्रक्रिया राम्रो अपेक्षित ovulation को दिन मा, यौन सहवास को वास्तविक सुरु गर्नु अघि 20-30 मिनेटमा गरेको छ। गर्छन् अन्य दिनमा douching शुक्राणु र गर्भाशय र fallopian ट्यूब मा, को अन्डा त्यहाँ अझै पनि प्राप्त गर्नुहुने छैन गर्न सक्षम पनि भने, व्यर्थ छ। यो विधि को पनि बारम्बार प्रयोग योनी को प्राकृतिक microflora विघटन र overdrying गर्न सक्छ।
यो प्रक्रिया thrush धेरै मद्दत गर्छ कि टिप्पण लायक पनि छ: सोडा जल, खुजली relieves र थप प्रभावकारी देखि श्लेम लाग्एको खाली cheesy छुट्टी। तर यो रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ भूल छैन, तर अस्थायी रूपमा मात्र अप्रिय लक्षण समाप्त।
धेरै डाक्टर अवधारणा लागि अदक्ष सिंचाई सोडा, यस विधि बारे संदेह हो कि अलग तथ्यलाई बावजुद, समीक्षा कि यो छ धेरै को लागि, तैपनि मदत सुझाव। त्यसैले, जो केटी गर्भवती प्राप्त गर्न सकिएन धेरै महिनाको लागि तिनीहरूले फेरि र douching प्रयास निर्णय गर्दा सकारात्मक परीक्षण कि चक्र छ देखेको छ। निस्सन्देह, यो एक सार्वभौमिक तरिका हो। र यो सबै अवधारणा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्षम छ। तर सर्वेक्षण कि स्पष्ट स्वास्थ्य समस्या, तपाईं न न त कुनै मानिस र सबै गर्भावस्था उत्पन्न गर्दैन देखाउन भने, त्यसपछि किन यो सोडा अवधारणा लागि douching प्रयास छैन?
को fallopian ट्यूब को hydrosalpinx कस्तो व्यवहार गर्ने? चरण सङ्केत गर्छ
प्रारम्भिक गर्भावस्था Cystitis। प्रभाव cystitis गर्भावस्था
अवरुद्ध ducts: कारणहरू, लक्षण र उपचार
यो गर्भावस्था को समयमा प्रेम गर्न सम्भव छ: खुला गोप्य
अलेना अम्म्मिलेले। क्यारियर इतिहास।
दबाइ "Fosfalyugel": समीक्षा। "Fosfalyugel": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
कार हावा-कंडीशनिंग सिस्टम: निदान, मर्मत, लुगा धुने, सफाई, प्रणाली मा दबाव। एक कार वातानुकूलन सिस्टम कसरी धुन?
दैनिक क्यालोरी - रूपमा हुनुपर्छ।
के खाने को लागि एक भोक मानिस लागि खाना पकाउनु?
Momordica: उपचार, गुण, आवेदन
मानिसहरू, महिला, र बच्चाहरु को लागि युक्रेनी ऊन शर्ट। युक्रेनी राष्ट्रिय लुगा
कति चाँडो उनको अनुहार मा चोटपटक हटाउन मा केही सुझावहरू
मांसपेशी कसरी निर्माण गर्न